Waterpark Alpamare, Alpamare - ဇူးရစ်
ဥရောပ ဆွစ်ဇာလန် ဇူးရစ်
နေရပ်လိပ်စာ: Gwattstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ
ဖုန်းနံပါတ်: +41 55 415 15 75
E-mail ကို: alpamare@alpamare.ch
10-00 ကနေ 21-00 မှ 10-00 ကနေ 22-00 မှကြာသပတေးနေ့မှတနင်္လာနေ့, သောကြာနေ့-စနေနေ့ 10-00 ကနေ 23-00 ဖို့, တနင်္ဂနွေနှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ: hours
ခ: အရွယ်ရောက် - 90 ပြင်သစ်,6ကနေ 16 ကလေးများ - 45 ပြင်သစ်,6နှစ်အောက်အသက်အနှစ်ကလေးများ - အခမဲ့
ရေပန်းခြံ "Alpamare » (Alpamare) ဆွစ်ဇာလန် နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ် ဇူးရစ် နှင့်အကောင်းဆုံးရောနှောဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားများအကြားလူသိများသည်။ Alpamare - ပိုပြီးတစ်နှစ်ခွဲထက်ကီလိုမီတာ၏စုစုပေါင်းအရှည်အများအပြားရေကူးကန်များလည်းပါဝင်သည်သောကြီးမားရှုပ်ထွေးသော, အရာတို့တွင်အအပူရေကန်နှင့်လှိုင်းတံပိုး, အနည်းငယ်ရေပြွန် 10 ခု tobogans (ပွင့်လင်းရဲ့ထိပ်နှင့်အတူဆလိုက်) ။ သင်ဆိုလာရီယံအတွက်နေပူထဲနိုင်ပါတယ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာဧရိယာသည်ချွေးပေါင်းအိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အနှိပ် table ထဲမှာအနားယူလည်းရှိပါသည်။
အတုလှိုင်းတံပိုးနှင့်အတူရေကူးကန်ရေကူး။ တစ်နေ့တာအတွင်း, ရေကန်ရေသင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်နေ့လျှင်ရေကူးနိုင်သည့်အတွက် 30 ဒီဂရီမှာထိန်းသိမ်းထားသည်။ တိုင်းတစ်ဝက်နာရီ, လှိုင်းမီတာမုန်တိုင်းရန်လငျး "သိုးသငယ်" ၏ရေကူးကန်ထ။ 18:00 အစစ်အမှန်မုန်တိုင်းရေကူးကန်ထဲမှာမြင့်တက်ပြီးနောက်နေ့တိုင်းကအားလုံးကိုတစ်မိုးဖွဲနှင့်အတူစတင်, ထို့နောက်မိုးရွာရွာမိုးခြိမ်းသံများနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလျှပ်စီးနှင့်အတူမုန်တိုင်းများအရှိန်နှင့်တွေ့။
ရေကူးကန်ရီယို Mare - လှိုင်းလေထန်စီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သို့ empties သောဤရေကူးကန်, သင်လှိုင်းစီးခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီမှာဆလိုက်ကြသည်။ "လေဆင်နှာမောင်း" နှင့် "ရေခဲပြင် Express ကို" သူတို့တွင်အများဆုံးအစွန်းရောက်စဉ်းစားနေကြသည်။ "လေဆင်နှာမောင်း" မြန်နှုန်းမြင့်မှာသင်ကိုစို့သည်ဟုအနည်းငယ်ကတော့ဆင်းရာနီးပါးတစ်ဝက်မီတာတစ်ပိုက်အချင်းဖြစ်ပါသည်။ "ရေခဲပြင် Express ကို" - လူအများ၏အားကြီးသောဝိညာဉ်သည်ပျော်စရာ, 160 မီတာပိုက်အရှည်, အနွယ်ဖွားစဉ်အတွင်းသင် 11 hairpin ကွေးလွန်သွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်အဆုံးမှာအမြင့် 17 မီတာကနေသင်တို့ကိုအခမဲ့ကျဆုံးခြင်းအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ။
"Cobra" - မှောင်မိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမျှအလင်းမြင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်ရိုင်းသို့နွယ်ဖွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပုံရပေမယ့်အဲဒီမှာအလင်းဖြစ်၏သင်ရေထဲသို့ကျရာမှတဆင့်ဆင်းလျှော;
"မူလစာမျက်နှာ" - သင်ကရေတံခွန်ရနှင့်ရေထဲသို့ကျဆင်းရဲ့အဆုံးမှာအယ်လ်အီးဒီ 20, ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့မှောင်မိုက်ဆလိုက်;
"Balla-Balla" - သငျသညျရာသီဥတုအေးအတွက်ပန်းခြံသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှင်ဆလိုက်အများစုတို့သည်ပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်ဖြစ်ပါသည်, ရှည်လျားသော 260 မီတာလျှော - ဤတောင်ကုန်းပေါ်မှနွယ်ဖွားအပေါ်အေးခဲဖို့ပြင်ကြလော့
"Alfa-ဘော့" - ၏လှပသောအမြင်များနှင့်အတူနွယ်ဖွား 400 မီတာ ရေကန်ဇူးရစ် နှင့် Rappersvilky ရဲတိုက်ပေမယ့်နွယ်ဖွားလူအနည်းငယ်ကသာပတျဝနျးကငျြဒေသ၏မြင်ကွင်းကျယ်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်မတ်စောက်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်လျက်ရှိ၏
"Cross-ချောက်" - တိုတောင်းတဲ့တောင်စောင်းတောင်ကုန်း, ရှပ်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရေကူးဘို့ဂိုဒေါင်စာရင်းမှလူ့ပေးပို့ဖြစ်တယ်, ဒါပင်လေးတွေသူမ၏အပေါ်နှိမ့်ချသွားနိုင်ပါတယ်။
ရေကူးကန်အဆုံးမဲ့ Peak - surfing များအတွက်ဥရောပရဲ့တစ်ခုတည်းသောမိုးလုံလေလုံရေကူးကန်။ သငျသညျ surfing အပေါ်သင်ခန်းစာများယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိ။ ဒါ့အပြင်ဒီအင်တုံထဲမှာ surfing ပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးအိမ်ရှင်အဖြစ်။
သားသမီးတို့အဘို့နယူး Kinderbereich ရေကူးကန်။ မေလ 8, 2016 တွင်ရေကူးကန်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုခန်းမဖွင့်လှစ်ခဲ့ သည့်သားသမီးတို့အဘို့ အထိခြောက်နှစ်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးလမှပါ။ သစ်ကိုဇုန်များတွင်လေးတွေများအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆွဲဆောင်မှု, ရေဆလိုက်ကြသည်။ ရေကူးခြင်းနှင့်ရေငုပ်အတွက်မာစတာအတန်းကောက်ယူ4မှ6နှစ်အထိအနေဖြင့်သားသမီးတို့အဘို့, Animation အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အမြိုးသားအပျော်စရာရှိသည်နေစဉ်, မိဘများအထူးထိုင်ခုံပေါ်တွင်ရေကူးကန်ပတ်ပတ်လည်အနားယူနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပူကျောက်, ခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စ္စ, တကိုယ်လုံး၏ exfoliation ကုသမှု, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို shugarin, bio- သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအပူပေးခန်းနှင့်အတူနှိပ်နယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြံ့ခိုင်ရေးဧရိယာ, ကြီးသော cardio ဧရိယာနဲ့အားကစားရုံ။
အတွက် Alpamare ရေပန်းခြံသည်အထိ ဆွစ်ဇာလန် ကနေရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ဇူးရစ် Pfäffikon SZ3မှတ်တိုင်များ - လမ်းရထား Chur RE ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မကောင်းပါ Seedamm AG က, Alpamare4မှတ်တိုင်များသွားကြဖို့Pfäffikon SZ ကနေ 195 ဘတ်စ်ကား။ ယင်းတွင် ကားတစ်စီး ဇူးရစ်အိုင်№3တစ်လျှောက်တွင်လမ်းသွားရမယ်, ခရီးတစ်နာရီခန့်ကြာ။
45 နဲ့ကလေးတွေအဟောင်း6နှစ်အောက်နှင့်တာဝန်ခံပင်အခမဲ့ - တစ်ခရီးစဉ်၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်လက်မှတ် 90 CHF, သားသမီး616 နှစ်ကုန်ကျသည်။ အဆိုပါနှစ်ပတ် 16 နှစ်အထိကလေးများမီနှင့်နှစ်ပတ်အတွင်းငါ့မွေးနေ့အပြီးစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြသည့်အခါအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တားမြစ်သည် 16 နှစ်အောက်ကလေးများကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာဧရိယာ၌ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အဆိုပါ site ကို၎င်း input ကိုကုန်ကျစရိတ်၏ 50% အထိဈေးလျှော့နဲ့အမြဲတမ်းရေပန်းခြံလက်မှတ်အရောင်းဖြစ်ပါတယ်, အွန်လိုင်းကူပွန်သုံးလကနေသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရသောအခါအလွန်အသုံးဖြစ်သောတစ်နှစ်မှတရားဝင်ဖြစ်ကြသည်။
Saury နှင့်အတူ Jellied ကိတ်မုန့်
မေတ္တာ၌ Kylie Minogue နောက်တဖန်
ကိုယ်ဝန်မျိုးရိုးဗီဇခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - ရလဒ်များကို
ကလေးသူငယ်အခ 1 ကိုယ်ဝန်မှာရွှေ့ဖို့စတင်သည်သည့်အခါ?
ဘယ်လိုအတွင်းပိုင်းတံခါးများရွေးချယ်ဖို့ - သိကောင်းစရာများ
မိုးပြာရောင် capris ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အဆိုပါ Ovary ၏ကှဲထှကျ - အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ
တစ်ဦးထုပ် SOCKS မိန်းကလေးငယ်ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Sarah Jessica Parker တို့: "တစ်ချိန်တည်းမှာ mom, နှင့်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ခြင်း - ရိုးရှငျး"